Dhulgariir tsunami wata oo ka dhacay Jaban (Sawiro ) | raascasayrmedia.com
← Shirweynaha Beelaha siwaaqroon oo maalinti labaad galay iyo gudiyo looga dhawaaqay
DKMG iyo Shabaab oo dagaal qasaaro gaystay ku dhexmaray Muqdisho →
Dhulgariir tsunami wata oo ka dhacay Jaban (Sawiro )
Dhul-gariir ba’an oo lagu qiyaasay tii ugu sarraysay taariikhda dalka Japan ayaa ka dhacay dhinaca Waqooyi Bari ee Japan, waxanu gaadhey heer ah 8.9 qiyaasta Richter. (Magnitude)In ka badan 60 qof ayaa ilaa hadda la soo sheegay inay ku dhinteen, dhaawac fara badanna geystey. Waxa kale oo la laayay markab sidey dad ilaa 100 qof gaadhaya oo mawjadihii badda ee dhul gariirku kiciyey la tegeen.
Waxa kale oo burburay hanti iyo dhismayaal aad u fara badan, magaalooyin, iyo dhul-beereed ku yaalla degaanka Sandai. Waxa kale oo gubtay warshado wax sifeeya, iy cabsi laga qabo dhaawacyo soo gaadhay warshado Nuclear ah. Ilaa haddase lama soo sheegin wax shucaac ah oo nuclear ah oo faafay.
Dhibaatada kale ee dhul-gariirkani abuuray waxa ka mid ah kacdoon xagga badda ah oo u dhigma duufaannadii Tsunami oo khatar geliyay xeebaha dalal badan oo kale.
Waxa kale oo haatan lagu dhawaaqay xaalado degdeg ah iyo digniin saamaynta Tsunnaamidan cusub ee dalalka kale ee ay ka mid yihiin Australia, New Zealand, Phillipines, Indonesia, iyo xataa kuwa Jasaairka badweynta Pacific, gobolo ka tirsan Marayanka, iyo Latin America